NY FANAMPIANA NY MPISOLOVAVA AN-TELEFAONINA
NY MPISOLOVAVA AN-TELEFAONINA
Ny toerana dia inona fotsiny ianao dia efa mitady, fa tsy hitako eo anivon ny antontan-ambany dia ambany ny kalitao sy ny hosoka tetikasa.
Nahoana isika, manontany
Eny, ny zava-drehetra dia tena tsotra. Isika no hany orinasa ny tambajotra izay vonona ny hanampy free malalany mpanjifa izay tena ao amin’ny toerana sarotra. Izany dia hita fa tsy izany no mampatahotra, fa raha ny fandehany fa na ny zavatra momba ny fisaraham-panambadiana raha ny fizarana ny fananana dia afaka milalao lozabe vazivazy miaraka aminao.Na dia izany no tena olana iraisana ho an’ny mpiasa rehetra ny lalàna, fa ny tsirairay amin’izy ireo dia tokony araka ny tokony ho izy sy ny olona hanatona.
Inona koa no azontsika tsara. Saingy ny valiny dia maimaim-poana ara-dalàna ny toro-hevitra avy amin’ny an-tariby.
Ny orinasa dia tafiditra ao anatin’izany tetikasa miavaka
Tsy mila ela mba hahita ny valin ny fanontaniana ao amin’ny tranonkala na ny miandry ny fanontaniana ny valiny mpanolo-tsaina an-tserasera, satria tsy mangataka be dia be ny mpahay lalàna sy efa tena kely toy izany ny boky ho liana amin’ny. Noho izany, mba hamaha ny olana, efa nampahafantatra ny antso ho an’ny fizaham-pahasalamana.Eny, mety tsy ho afaka hahazo ny alalan ny voalohany eo ny mpiandry raharaha, nefa tsy handao azy taorian’ny voalohany andrana tsy nahomby ary avy eo ny mpisolovava mety hanampy anareo amin’ny famahana indrindra na dia ny toa tsy toe-javatra sarotra.
Na ahoana na ahoana, dia mirary anao foana ny mahita zavatra na dia mamirapiratra ao amin’ny tena unsolvable olana, ary ny fitsaboana ny zava-drehetra amin’ny kely fatra ny eso sy ny filozofia fa toy ny olona sy ny za-draharaha dia nahatakatra fa izay rehetra voavaha olana haharitra iray manontolo tady ny olana kely izay tany amin’ny farany dia ho amin’ny lahatra. Noho izany, raha toa ka mila ara-dalàna ny hanampy avy hatrany maika ho antsika sy ny fanapahan-kevitra dia tonga ho azy noho ny ara-dalàna manam-pahaizana manokana amin’ny ara-tsosialy isan-karazany ny andrim-panjakana